सेगिंग ब्रेस्टहरूको लागि HOME घरेलु उपचार - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
सेगिंग ब्रेस्टको लागि Home घरेलु उपचार
घर स्वास्थ्य कल्याण कल्याण ओआई-अमृता के द्वारा अमृता के। जनवरी २ 24, २०२० मा
हरेक महिलाको स्तनको आकार र आकार फरक हुन्छ। र उमेरका साथ तपाईको छाती पनि परिवर्तन हुन्छ र विकास हुन्छ। तपाईको स्तनहरू यसको वास्तविक आकार र लोच गुमाउनको लागि यो पूर्ण प्राकृतिक र सामान्य छ। सेगि bre स्तनहरू चिन्तित हुन केही होइन - तर धेरै महिलाहरूमा चिन्ताको कारण हो।
सामान्यतया, स्तन झिक्न 40० बर्षको उमेर पछि सुरु हुन्छ। तर यो स्तनपान, गर्भावस्था, अचानक वजन घटाउने, बिरामी फिट ब्रा लगाउनु, पोषणको कमी आदिको कारणले पनि हुन सक्दछ।
चिकित्सकीय रूपमा, झुग्ने स्तनहरूलाई ptosis भनिन्छ र प्लास्टिक सर्जनहरूले उपचार गर्ने सबैभन्दा धेरै सामान्य अवस्थामा यो हो  । यद्यपि चक्कुमुनि जानु धेरैको लागि सजिलो वा प्राथमिक विकल्प हुँदैन। मेरो मतलब, कस्मेटिक सर्जरीहरूले तपाईलाई ठूलो पैसा खर्च गरे।
यद्यपि, प्लास्टिक सर्जरीहरू स्यागिंगको प्रभावहरू रोक्न वा कम गर्नको लागि मात्र विकल्प छैनन्। यहाँ केहि प्रयास गरिएका र परिक्षण गरिएका घरेलु उपचारहरू छन् जुन तपाईंको महिलाहरूलाई स्थिर र ठाउँमा राख्न मद्दत गर्दछ।
१. मेथी (मेथी)
एउटा सामान्य आयुर्वेदिक उपचार, मेथी प्रयोग गर्नाले स्तनहरू झुन्ड्याउनबाट जोगाउन सकिन्छ। मेथीमा एन्टिआक्सीडन्टहरूले समयपूर्व बुढो हुने लक्षणहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ, यसले तपाईंको छाला सफा गरी र दृढतामा सुधार गर्दछ। [दुई] ।
कसरी घर मा प्राकृतिक र स्थायी रूपमा निष्पक्ष बन्न
Table- table चम्चा मेथी पाउडर र १ कप पानी लिनुहोस्।
यसको पेस्ट बनाउनुहोस् र5मिनेटको लागि तपाईंको स्तनहरूमा यसलाई मसाज गर्नुहोस्।
त्यहाँ अर्को १० मिनेट को लागी छोड्नुहोस्।
कुल्ला र हप्तामा दुई पटक यो जारी राख्नुहोस्।
तपाईंसँग मेथी तेल, एक अण्डाको सेतो, १० बूंद भिटामिन ई तेल र ½ कप दही हुनुपर्छ।
राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र तपाईंको स्तनहरूमा पेस्ट लागू गर्नुहोस्।
यो 30 मिनेट को लागी बस्न दिनुहोस्।
चिसो पानी संग यो कुल्ला।
हप्तामा एक पटक यो गर्नुहोस्।
२. अण्डाको पहेंलो र मुसब्बर वेरा
यो प्राकृतिक उपचार सग्गी स्तनहरूमा दृढ रहनको लागि उत्कृष्ट परिणामहरू प्रमाणित गर्दछ जब नियमित रूपमा अनुसरण गरिन्छ। एलोवेरा एन्टीआक्सीडन्ट र भिटामिन ईमा समृद्ध हुन्छ, जसले स्तनको ऊतियाहरूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ, जसले गर्दा तपाईको स्तनहरू अझ कडा र पूर्ण हुन्छ। यसमा प्राकृतिक छाला कस गुणहरू पनि छन् ] । अण्डाको पहेंलो प्रोटीन र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडमा समृद्ध हुन्छ जुन पेक्टोरल मांसपेशिहरू र अन्तर्निहित स्तन टिश्यूहरू फर्मर र पर्कीयर बनाउनका लागि धेरै आवश्यक हुन्छ। ] ।
तपाईंसँग २ चम्मच खाने योग्य एलोवेरा जेल र १ चम्मच अण्डको पहेंलो हुनु पर्छ।
एक कपमा सामग्रीहरूको सुझाव गरिएको मात्रा थप्नुहोस् र टाँस्न राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
एक गोलाकार गति मा आफ्नो स्तन मालिश गर्नुहोस्।
१० मिनेटको लागि त्यस्तै छोड्नुहोस्।
तातो पानी संग आफ्नो स्तन कुल्ला।
१ चम्मच मेयोनेज र मह र १ चम्मच एलोभराको मिश्रण बनाउनुहोस्
यसलाई तपाईंको स्तनहरूमा हल्का रूपमा लागू गर्नुहोस् र यसलाई १ 15 मिनेटको लागि बस्नुहोस्।
पहिले आफ्ना स्तनहरू तातो र त्यसपछि चिसो पानीले धुनुहोस्।
हप्तामा दुई पटक यो गर्नुहोस्।
नोट : यो उपचार लिनेसँगै, व्यक्तिले प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ पनि खानुपर्दछ र स्तनपान गर्न सक्ने पेक्टोरल व्यायाम अभ्यास गर्नुपर्छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार अण्डको जर्दी भिटामिन र प्रोटीनले समृद्ध हुन्छ जसले स्तन झिकनेको उपचारमा मद्दत गर्दछ, जबकि खीरामा प्राकृतिक छालाको लागि उत्तम गुणहरू हुन्छन्। ] ।
राति न्यानो पानी संग मह
१ सानो काकडी ब्लेन्ड गर्नुहोस्।
१ चम्मच मक्खन र १ अण्डको जर्दी मिक्स गर्नुहोस् एउटा पेस्ट प्राप्त गर्न।
मिश्रण तपाईंको स्तनहरूमा हल्का रूपमा लागू गर्नुहोस् र 30० मिनेटको लागि त्यस्तै छोड्नुहोस्।
चिसो पानीले तपाईंको स्तनहरू राम्ररी धुनुहोस्।
तपाईं हप्तामा दुई पटक यो गर्न सक्नुहुन्छ।
G) अण्डा सेतो
अण्डों को सेतो संग आफ्नो स्तन मालिश आफ्नो छाती को वरिपरि छाला को लागी राम्रो छ किनभने अण्डा सेतो को हाइड्रो lipids (चर्बी र पानी को एक छाला को छाला को मदत गर्न सक्छ) ] ।
तपाईंसँग १ अण्डा र १ खक्रा हुनु आवश्यक छ - रसमा निर्मित।
पहिले, १ अण्डा सेतोमा हराउनुहोस् जबसम्म यसको फोम बनावट हुँदैन।
तपाईंको स्तनहरूमा मिश्रण लागू गर्नुहोस् र 30० मिनेटको लागि यसलाई छोड्नुहोस्।
काखडीको रस छाती धुने प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि चिसो पानीले त्यसलाई धोउनुहोस्।
तपाईं हप्तामा एक पटक यो गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग १ चम्मच दही र मह हुनु पर्छ।
दही र महको साथ १ अण्डा मिलाउनुहोस्।
तपाईंको स्तनहरूमा मिश्रण लागू गर्नुहोस् र २० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
चिसो पानी संग आफ्नो स्तन धुनुहोस्।
एक प्रभावी एन्टी-एजिंग कम्पोनेन्ट, अनारले तपाईंको स्तनहरूको स्यागि slow्ग धीमा पार्न सक्छ। तपाईं पनि अनारको दानाको तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन फिटोन्यूट्रिएन्ट्सले भरिएको छ जसले स्तनहरूलाई फर्म गर्न मद्दत गर्दछ। ] ।
तपाईंसँग १ चम्मच सरसों तेल र अनारको बोक्रा हुनु पर्छ।
केही तातो रायोको तेल र अनारको बोक्रा लिनुहोस् र एउटा पेस्ट तैयार गर्नुहोस्।
हरेक साँझ लगभग १० मिनेट यसका बारे गोलाकार गतिमा आफ्ना स्तनहरू मालिश गर्नुहोस्।
हप्तामा यो २- 2-3 पटक दोहोर्याउनुहोस्।
पानीमा भिजेको बदाम को फाइदा
As चम्मच नीमको तेल लिनुहोस् र यसलाई १ चम्चा सुकाइ र पाउडर अनारको राईन्डको साथ मिलाउनुहोस्।
केही मिनेट को लागी यो मिश्रण तताउनुहोस्।
यसलाई केही समयको लागि चिसो हुन दिनुहोस् र गोलाकार चालमा यसको मालिस गर्नुहोस्।
तपाईले दिनमा दुई पटक गर्न सक्नुहुन्छ।
Ol. जैतुनको तेल
जैतुनको तेलमा फ्याट्टी एसिड र एण्टीआक्सीडन्टहरू हुन्छन् जसले फ्रि रेडिकलले गर्दा हुने क्षतिलाई उल्टाउन सक्छ, जसबाट स्तनहरूको स्यागिंग रोक्न सकिन्छ। तपाईं स्तनहरू मसाज गर्नका लागि अन्य तेलहरू जस्तै जोजुबा, एवोकाडो, बदाम वा अर्गोन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ] ] ।
पहिले तपाईंको हत्केलामा जैतुनको तेल हाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई खसाल्नुहोस्।
तपाईंको पामलाई तपाईंको स्तनहरूमा माथिल्लो गतिमा खसाल्नुहोस्।
लगभग १ minutes मिनेट मालिश गर्नुहोस् र यसले रक्त प्रवाह बढाउनेछ र कोशिका मर्मतलाई उत्प्रेरित गर्दछ।
यो हप्तामा or वा times पटक गर्नुहोस्।
बरफ मालिश सग्गी स्तनहरूमा दृढताको लागि राम्रो हो किनभने चिसो तापक्रमले स्तनहरूमा टिश्युहरू संकुचित गर्दछ, जसले गर्दा तपाईंको स्तनहरू स्थिर हुन्छन्। अन्य विधिहरूको तुलनामा, बरफ मालिशको एक कम कम प्रभाव देखिन्छ  ।
दुई आइस क्युब्स लिनुहोस् र दुबै स्तनलाई एकै मिनेट अवधिमा गोलाकार गतिमा मालिश गर्नुहोस्।
तौलियाले स्तनहरू पुछ्नुहोस् र तुरून्त ब्रा राख्नुहोस्।
Minutes० मिनेट को लागी एक reclining स्थिति मा रहनुहोस् र जब तपाईं सक्नुहुन्छ मालिस गर्नुहोस्।
नोट : यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यो एक मिनेट वा दुई भन्दा लामो समयसम्म गर्नुहुन्न किनकि यसले सुन्नलाई निम्त्याउन सक्छ।
फ्यागि sa सेग्गिंग ब्रेस्टहरूको लागि केहि अन्य उपायहरू शिया बटर मसाज र रासौल माटो हुन्।
धेरै जसो समय तपाई शरीरको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। तपाईं सही प्रकारको ब्रा लगाएर, आफूलाई हाइड्रेट गरेर, बसेर र हिड्दै गर्दा राम्रो आसन कायम राख्दै (कुनै स्लम्पि,, महिलाहरू!) र भिटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम र आवश्यक समावेश सहितको स्वस्थ आहार पछी तपाईं स्तनहरू सार्न रोक्न सक्नुहुन्छ। बोसो [एघार]  ।
यदि तपाइँसँग धूम्रपान गर्ने बानी छ भने - दुई पटक सोच्नुहोस् - यसलाई बन्द गर्नुहोस्।
माथि उल्लिखित घरेलु उपचार बुढोपन, गरीब आसन र यस्तै कारणहरूले गर्दा स्तनहरू स्याग गर्नको लागि लाभदायक हुन्छ। कुनै पनि चिकित्सा अवस्थाको कारण हुने स्तनहरू स For्गुन गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
ओछ्यानमा कसरी आफ्नो मानिसलाई बहकाउने
घरमा एक हप्तामा सपाट पेट कसरी पाउने
तस्बिरहरूको साथ कदम पछि कुखुराको नुस्खा
ओमेगा fat फैटी एसिड फूड शाकाहारी छन्
कसरी ओभन बिना साधारण केक बनाउन
गुढी पाडवा २०२० शुभकामना माराठीमा
योग आसनहरू फिला कम गर्न